कद्दू मीठो - थर्मोमिक्स रेसिपी | थर्मो रेसिपीहरू
जाम67 मिनेट25 व्यक्ति90२ क्यालोरी
यो कद्दू मीठो संग तरकारीहरु मध्ये एक को मजा लिन संभावनाहरु को एक सम्पूर्ण संसार खुल्छ बजारमा सबैभन्दा बहुमुखी।
तपाईंले पहिले नै देख्नु भएको छ, कद्दू ती सामग्रीहरू मध्ये एक हो जुन हामीले प्रयोग गरेका छौं अन्तहीन व्यंजनहरु। जेसुकै भए पनि मिठाई o सलाद, सबै मा यो छ आफ्नो औंलाहरु चाट्न।
यो पहिलो पटक होइन कि मैले यस प्रकारको मिठाईहरू Thermomix® बाट बनाउँछु, ती सबै समान छन् सजिलो। जे भए पनि quinces संग o मीठो आलु संग, तिनीहरू सबै राम्रो देखिन्छन्।
1 कद्दू मिठाई
2 तपाईं यो कद्दू कैंडी बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ?
यो कद्दू फज हप्ता सम्म रहन्छ र मीठो र स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु बनाउन को लागी आदर्श छ।
सर्भिंग आकार: 40
तयारी समय: 35M
1 किलो सफा कद्दू
२ g अगर अगर
हामीले सफा र काटेको कद्दूलाई भान्साको कागजको साथ लाइन गरिएको बेकिंग पानामा राख्छौं र 25 मिनेट वा कद्दू कोमल नभएसम्म बेक गर्छौं।
समय टुक्राहरूको आकारमा निर्भर गर्दै अलि फरक हुन सक्छ।
हामी गिलासमा कद्दू राख्छौं र चिनी थप्छौं। हामी समयमा क्रस गर्छौं Seconds० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 30-5-7।
अगर आगर थप्नुहोस् र मिश्रण गर्नुहोस् Seconds० सेकेन्ड, गति 20।
अर्को हामी कार्यक्रम Minutes मिनेट, १००º, गति १।
समयको अन्त्यमा, हामी तातो मिश्रणलाई छानिएको मोल्डमा हाल्छौं र यसलाई चिसो गरौं।
जब यो कोठाको तापक्रममा हुन्छ, हामी यसलाई केही घण्टाको लागि फ्रिजमा भण्डारण गर्छौं।
सेवाको समयमा, हामी अनमोल्ड गर्छौं र स्रोतमा वा खानाको लागि उपयुक्त टेबलमा प्रस्तुत गर्दछौं।
तपाईं यो कद्दू कैंडी बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ?
सत्य यो हो कि यस प्रकारको तयारीले हामीलाई मद्दत गर्दछ संरक्षण गर्न लामो समयको लागि कद्दू र वर्षभरि यसको मजा लिन सक्षम हुनुहोस्।
यसले राम्रो रकम बोक्छ चीनी तर तपाइँ पहिले नै थाहा छ कि यो घटक मिठाई, जाम र संरक्षण को संरक्षण मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
पनि अगर अगर यो नुस्खामा नायक हो किनभने, यदि धेरै सानो मात्रामा प्रयोग गरिन्छ भने, यो मिठासको लागि जिम्मेवार छ। उत्तम बनावट: चिल्लो तर कडा छैन।
मैले सुरुमा उल्लेख गरेझैं, यो कद्दू क्यान्डी रमाइलो गर्नको लागि उपयुक्त छ अन्तहीन व्यंजनहरु। तपाईं यसलाई टर्की वा कुखुरा जस्ता मासुहरू, क्विच, स्यान्डविच, स्यान्डविच, डम्पलिङ वा क्रोकेटहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि, व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ कि यसको आनन्द लिने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो मिश्रित चीजहरूको राम्रो बोर्ड। विभिन्न प्रकारको रोटी, केही अंगूर र केही सूखे फलहरू जस्तै अखरोट र हेजलनटहरू राख्न नबिर्सनुहोस्। तपाई पक्कै सफल हुनुहुनेछ !!
संकेत गरिएको मात्रा संग यो बाहिर आउँछ 1 किलो मिठाई। प्रति व्यक्ति अनुमानित भाग लगभग 40 ग्राम छ। त्यसैले यो नुस्खा संग तपाईं लगभग 25 सर्भर हुनेछ।
उत्तम तरीका राख्न कद्दू क्यान्डी हर्मेटिक रूपमा सील गरिएको कन्टेनरहरूमा र यसको मात्रा अनुसार प्याक गरिन्छ। तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि हावा संरक्षणको राम्रो साथी होइन।
फ्रिजमा राख्नुभयो भने यसलाई जोगाउन सकिन्छ हप्ताहरु को लागी तर याद गर्नुहोस् कि यो अनन्त छैन र समय संग यो खराब पनि हुनेछ।
थप जानकारी - कद्दू संग 10 आश्चर्यजनक व्यञ्जनहरु / चकलेट ग्लेज संग कद्दू स्पन्ज केक / कद्दू र आलु Crocchette / खण्डमा मीठो / गुलियो आलु / अगर, समुद्रको जेली
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, जाम र संरक्षण, भेगन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » जाम र संरक्षण » कद्दू मिठाई
अनानास केक क्रीम र चीज संग
गुलाबी पैन्थर आर्म